Best Transfer File macruufka si ay u gudbiyaan Faylal ay ku macruufka Devices
Best macruufka Files Transfer si ay u gudbiyaan Faylal ay ku macruufka Devices
> Resource > macruufka > Best macruufka Files Transfer si ay u gudbiyaan Faylal ay ku macruufka Devices
Haddii aad qabto mid ka mid ah qalab macruufka ah, aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan files iyo PC dhexeeya. Haddii aad leedahay 2 ama in ka badan macruufka qalabka, sida iPhone, iPod, ama iPad, mararka qaarkood si ay u wadaagaan files u dhexeeya 2 qalabka macruufka, waxaad u baahan tahay in aad wareejiso files. Si ay u fududaato inuu ka mid computer wareejiyo files, qalabka macruufka, waxaad isku daydaa inaad tan xirfad macruufka File Transfer Program - TunesGo Wondershare.
Download version tijaabo ah Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) !
Maxaad TunesGo Wondershare lagu talinayaa sida barnaamij ay Gordhaw Kadhoofaan gurmad faylasha?
Wondershare TunesGo waa barnaamij xirfad macruufka kala iibsiga file. Waxaa ku wareejinaya files audio, oo ay ku jiraan music, Lugood U, Podcasts, videos (labada bixi on iPhone ama qabtay iPhone), iyo sawiro ku Photo Library iyo Roll Camera ka qalab macruufka ah in qalab kale macruufka, ama ka qalab macruufka ah in computer ah . Tani waa waxa user u baahan yahay in la sameeyo ka dib markii uu dhaliyay faylasha qaar ka mid ah internetka laakiin Lugood marnaba u ogolaanaya sameeyo sababtoo ah arrimaha copyright. TunesGo falaa Lugood ma aan samayn karo. Waa qalab lagama maarmaan ah in an nolosha macruufka fududahay inaad u samaysaa. Si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah, waayo, taasu macruufka qalab kala iibsiga file, fadlan akhri info hoos ku qoran.
Feature Key wareejinta File macruufka - TunesGo
Copy music oo dhan ka qalab ah macruufka iyo wareejiyo Lugood Library on your computer;
Music Transfer, Lugood U, Podcasts ka deivce macruufka ah in computer ama qalab kale oo macruufka;
Videos Transfer, oo ay ku jiraan music video, movices, TV muujinaysaa ka qalab macruufka ah in computer iyo qalab kale oo macruufka;
Dhaqaaq Photos ka qalab macruufka ah in computer iyo qalab kale oo macruufka;
Playlists Nuqul ka qalab macruufka ah in Lugood Library (hadda laga heli karaa oo keliya version Windows TunesGo);
Meesha ay tani Transfer macruufka Faylal ay ka sii fiican tahay?
1-dii, iyadoo la isticmaalayo app desktop this si ay u gudbiyaan files macruufka u dhexeeya qalabka macruufka, qalab macruufka ah oo computer, files on qalabka macruufka aan la tirtirayaa. Waa masiibo ah si ay u isticmaalaan si ay u gudbiyaan Lugood files in qalab macruufka ah taas oo aan ahayn mid aad si joogto ah synced la Lugood.
2nd, waa app xirfadle ay Gordhaw Kadhoofaan si ay u gudbiyaan files (music iyo videos) dib u Lugood, qalabka computer iyo macruufka kale. Lugood ma qaban kartaa sidii aad ugu dhan. Waxay ka dhigaysa ilaa meesha Lugood gaaban dhaco.
3ird, geliya wax song iyo video in qalab macruufka ah iyada oo aan dhibaato incompatibility. Haddii users u baahan tahay inaad saaray video ah oo aan ahayn qaab qalab macruufka ah socon, taas macruufka app kala iibsiga file aqoonsan doono iyo waxa loogu badalo in ay macruufka ah qaab saaxiibtinimo.
Wondershare TunesGo waa mid ka mid ah qalabka macruufka files kala iibsiga ugu caansan. Ka sokow kor ku xusan, hadda Wondershare TunesGo (Windows) caawisaa dib xiriirada iPhone iyo SMS iyo sidoo. Waa maxay sababta aan kala soo bixi version maxkamad ay leeyihiin isku day ah oo hadda ah?
Raac Tutorial Video ay ku bartaan badan oo ku saabsan Transfer macruufka Files
3 Hababka si ay u gudbiyaan Xogta laga Old iPhone si iPhone 6 / iPhone 6 Plus
Sidee si ay u gudbiyaan Photos, Video, Calendar, Xiriirada, iMessages iyo Music ka iPod
Mid ka mid ah Click in ay beddelaan ka macruufka in Samsung
Eegno jailbreak uga faaidaysan tufaax oo ay ku dhinteen in beta Ios9
Sida loo isticmaalo macruufka Emulator u Android
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga ZTE si macruufka Devices
Sida loo soo diro Facebook Rasuulka Messages / Photos / Videos on macruufka
5 Waxyaabaha waajib ah inaad samaysid Ka hor inta Casriyaynta in macruufka 8
macruufka 7 Data Recovery - Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Data ka dib markii macruufka 7 Hagaaji